apple Archives — Anycall Mobile
Apple ကတော့ ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်း ၁၂ ခွဲအချိန်လောက်တုန်းက One More Thing Event အသစ်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အရင် စက်တင်ဘာလ နဲ့ အောက်တိုဘာလ Apple Event မှာ Apple Watches, iPhones,…
Apple ရဲ့ November 10 Event အသစ်မှာ တွေ့ရမယ့် Product တွေက??
Apple အနေနဲ့လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့မှာသူတို့ရဲ့ One more thing event အသစ်ကိုကျင်းပလာတော့မယ်လို့ မနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အရင် စက်တင်ဘာလ နဲ့ အောက်တိုဘာလ Event မှာ Apple Watches, iPhones, တွေနဲ့…
Apple One ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ??
Apple အနေနဲ့ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တုန်းက Apple Event ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး Apple One ဆိုတဲ့ Service အသစ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီ Serives ဟာ အရင်လို Apple Services တွေကို တစ်ခုချင်းသီးခြားဝယ်နေစရာမလိုဘဲ…
Apple ရဲ့ iPhone 12 Series ဟာ October လလောက်မှာ ထွက်လာတော့မှာကို စာဖတ်သူအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီ iPhone 12 Series ထဲမှာဆိုရင် iPhone 12 ၊ iPhone 12…
iPhone တွေထဲမှာ 6GB RAM ပထမဆုံးပါလာမယ့် iPhone 12 Pro Max
အရင်ကထွက်ထားတဲ့သတင်းတွေအတိုင်းပဲ Apple အနေနဲ့ September 15 ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Time Flies Event မှာ iPhone 12 Series မိတ်ဆက်လာခြင်းမရှိဘဲ iPad 8th Generation, iPad Air 4th…
AirPods Studio ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ??
Apple ကတော့ “AirPods Studio” ဆိုတဲ့High End Over-ear headphone တစ်ခုကိုပြုလုပ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Headphone ကတော့ iPhone 12 Series နဲ့အတူထွက်လာဖို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ AirPods Studio ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်း…
Apple အနေနဲ့ ဒီနေ့ ည ၁၁ ခွဲအချိန်မှာ Special Event တစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပြီး အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Products အသစ်တွေဖြစ်တဲ့ Apple Watch Series6၊ iPad Air 4th…
Apple September 15 Event မှာဘယ်လို Products အသစ်တွေကိုတွေ့လာရမလဲ??
Apple အနေနဲ့ လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ Virtual Event တစ်ခုကိုကျင်းပပြီး သူတို့ရဲ့ Products အသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာဘယ်လို Products အသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်လာမလဲဆိုတာကို Apple ဘက်ကကြေညာထားခြင်းမရှိပေမယ့် ကောလဟလတွေအရ Apple Watch…
ဈေးနည်းနည်း နဲ့ထွက်လာမယ့် Apple Watch SE
(Unicode) Apple ကတော့ လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ Apple Event တစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ Apple Watch အသစ်နဲ့ Apple Watch တွေထက် ဈေးပိုသက်သာတဲ့ Apple SE…